लेखक : Bibek Adhikari
कुरा केही वर्ष अगाडिको हो, त्यतिखेर म एक्लै बस्ने गर्थेँ। म बस्ने घर अलि पुरानो खालको थियो, जसको माथिको छ कोठामध्ये अगाडिको दुइटा कोठामा घरबेटीहरू बस्थे । म पछाडिको एउटा कोठामा बस्थेँ र माथिको ३ वटा कोठा खाली थियो । घरबेटीहरुको माथि नै भएपनि उनीहरुकोमा पुग्न बिचको गजवारवाला ढोका पार भएर जानु पर्ने भएको हुनाले घरबेटीहरू भएपनि म एक्लो जस्तै नै हुन्थेँ । Toilet-Bathroom सबै तल नै थियो। तलको तल्लामा क्याम्पस पढ्ने विद्यार्थीहरु बस्थे । त्यतिखेर गर्मीयाम थियो ।
त्यो दिन म केही काममा अल्झिएर बसेकोले गर्दा राति सुत्न अलि ढिलो भयो । सुत्नु भन्दा अगाडि हल्का हुनुपर्यो भनेर म त्यस्तै १०:३० तलतिर ओर्लें, त्यतिखेरसम्म सबैजना सुतिसक्नु पर्ने थियो तर गर्मीले गर्दा सुत्न सकिरहेका रहेनछन् । उमेश र उसको रुम पार्टनर राजेश आफ्नै कोठाभित्र गफिँदै थिए। म पनि सधैँझैँ उनीहरुको कोठातिर लागें । राजेश भर्खर गाउँबाट आएको हुनाले ऊसँग गफ गर्ने विषय धेरै नै थियो । ऊ भर्खरै गाऊँमा घटेको घटना बारे सविस्तार व्याख्या गर्दै थियो । उसको गाउँको साथीको भर्खरै गाउँ नजिकको दहमा डुबेर दु:खद निधन भएको रहेछ । ती युवकको शव निकालिएको विषयमा वर्णन गर्दै थियो । यसै प्रसङ्गमा कुरा हुँदाहुँदै गाउँमा देखिने गरेको भूतको कुरा हुन थाल्यो, जसलाई अधिकांश गाउँलेहरुले गोठमा, चौरमा, वनमा, खोला नजिकै वा बासँको झ्याङ्गमा देख्ने गर्थे । यो गफ मोडिदै बिस्तारै एक-अर्कालाई तर्साउने र रमाइलो मान्ने हिसाबले अगाडि बढ्न थाल्यो । गफै-गफमा उमेश र राजेश दुवैजना मिलेर मलाई तर्साउने हिसाबले कुरा गर्न थाले। दुवैजना मलाई भूत-प्रेतको कथा बनाउँदै सुनाउन पनि थाले, म यी सबैमा विश्वास नगर्ने भएकोले उनीहरु आफ्नो कुराहरु पुष्टि गर्न जोडतोडले लागिपरेका थिए । मलाई पनि यिनीहरुसँग मजाक गर्नुपर्यो भन्ने लाग्यो र मैले पनि तिनीहरुलाई तर्साउन नयाँ कथा बनाएर भनेँ जसअनुसार ऊनीहरु बसेको कोठामा एक असफल प्रेमी झुन्डिएर मरेको थियो । म उनीहरुभन्दा पहिलेदेखि नै त्यहाँ बसिरहेको हुनाले आफूसँग भएको अन्य जानकारीको प्रयोग गर्दै त्यस कुराको थप पुष्टि गरें । उनिहरुले सुरुमा त पत्याएका थिएनन् तर मैले हो कि हो भनेपछि उनीहरुले पनि विश्वास नगरी धरै भएन । यसरी उनीहरु पङ्गु बने भन्ने लागेपछि म माथि लागेँ र मस्तसँग सुतेँ ।
भोलिपल्ट बिहान अलि अबेला नै आँखा खुल्यो र नित्यक्रिया गर्न तलतिर लागेँ । तल त भद्रगोल नै भएको रहेछ । तलका सबैको अनुहार निन्याउरो देखिन्थ्यो, जसले उनीहरु राति राम्ररी नसुतेको कुराको पुष्टि गर्दथ्यो । म बाथरूमसम्म पुग्न भ्याएको थिइनँ; बाटैमा शेखर, जो बिचको कोठामा बस्थ्यो, ले हिजोको कुरा साँचो हो कि होइन भनेर सोध्यो। मैले कुन कुरा भनेर सोधेँ। उसले भूतको कुरा भनेर भन्यो अनि म छक्क परेँ । मैले उसलाई कसरी थाहा भयो भनेर सोध्दा उसले सम्पुर्ण कुरा भन्यो । हिजो म गइसकेपछि उमेश र राजेश बाहिर निस्केछन् र सबैलाई उठाएर मेरो कथालाई फुलबुट्टा भरेर सुनाउने काम चैँ राजेशले गरछ । त्यसले गर्दा अरुहरुपनि अबेरसम्म सुत्न सकेनछन् । यसरी एउटा कोठाभित्र गरेको मजाकले सारालाई सताएछ । त्यसले गर्दा अन्य कथाहरूपनि प्रकाशमा आयो । अरुहरुले पनि भूत भेटेको प्रमाण दिन थालेछन्, जसमा दिनेश, जो स्नातकको पढाई सकेर शिक्षण गरिरहेको थियो, ले सबैलाई उछिनेछ । उसले घरको पछाडिमा, गल्लीमा, धारामा समेत भूत भेटेको रहेछ । अरुहरूका पनि त्यस्तै खालका कुराहरु रहेछन् । त्यहाँ भएका मध्ये वैधनाथलाई सबभन्दा बढी असर परेछ । ऊ कक्षा १२ मा विज्ञान पढ्ने विद्यार्थी थियो । ऊ सबभन्दा पछाडिको कोठामा एक्लै बस्ने गर्थ्यो । तलका सवै जनालाई सुत्न जान डर लागेछ गफ गरेर १ बजेसम्म बसेछन् र त्यसपछिमात्र सुत्न गएछन् । वैधनाथको डरले गर्दा पेट दुखेछ । उसलाई रातभरी छेरपट्टी चलेछ । राति एक्लै सुत्न डर लागेर ऊ उमेशहरुको कोठामा सुतेछ । मलाई यि सारा कुराहरू सनेपछी सारै नै नराम्रो लाग्यो । अघिल्लो बेलुका यस्तो हुन्छ भन्ने लागेको भए अवश्य नै यस्तो कुरा गर्ने थिइन् । मेरो कारणले गर्दा त्यतिखेर सबैले दु:ख झेल्नुपर्यो । मैले यो मजाक हो भनेर भन्दा भन्दै पनि वैधनाथले त्यो घटना भएको १ हप्तापछि कोठा सर्यो । घरबेटीहरु यो घटना पछि मसँग रिसाएका थिए ,जसले मलाई झन् दु:खी बनाएको थियो ।
कति राम्रो हिमाल हेर हाँसे जस्तै लाग्छ
हिमालमा डाँफे चरी नाचे जस्तै लाग्छ
म पनि त हिमाल खोज्न लेक-बेँसी धाएँ
आखिरीमा आफ्नो हिमाल आफैसँग पाएँ
हेर साथी हिमालमा सेता दन्त लहर
हिमालसँग नाता गाँस्ने मेरो आफ्नो रहर
कस्तो राम्रो हिमाल हेर सधैँ हाँसिरहने
सबैसँग आफ्नो नाता गाँसिरहने
हामी पनि हिमाल जस्तै हाँस्न सिक्नुपर्छ
सबैसँग आफ्नो नाता गाँस्न सिक्नुपर्छ
हिमाल, पहाड, तराई कोही छैन पराई
हिँड्नुपर्छ हामी शत्रुसँग नडराई
सगरमाथा शिखर नेपालमा छँदै छ
त्यही माथि नेपालीको इज्जत बढ्दै छ
नेपाली हामी कमाउँन मिहिनेत गर्छौं
मिहिनेतअनुसार आफ्नो नाम कमाउँछौं
मलाई हिमाल र झर्ना साह्रै मन पर्छ
हिमालमा हिउँ पग्ली नदी बनी बग्छ
हामीले हिमाललाई माया गर्नुपर्छ
हिमालसँग हाँसी खुसी सधैँ बस्नुपर्छ
रचयिता :- अञ्जिता बर्तौला
कक्षा :- ८
कालिका मावि नामटार, मकवानपुर
धेरै धेरै सम्झना,
तिमीलाई मैले छाडेको एक वर्ष तीन महिना भइसकेछ । यस बीचमा तिमीलाई एउटा चिठी पठाएको थिएँ । तिमीले पाएकी हुनुपर्छ । तर मैले जबाफ पाउन सकिनँ, दु:ख लागिरहेको छ। मेरा जीवनका ऊर्जाशील वर्षहरूमा तिम्रो र मेरो बीच फस्टाएको प्रेमले गर्दा नै तिम्रो पत्रको उत्तर नपाए तापनि पत्र कोर्ने धृष्टता गर्दै छु ।
प्रिय छतु !
तिमीलाई मैले आजभन्दा तेह्र वर्षअगाडि मात्र चिनेको हुँ । सुरुमा तिमलिाई चिन्न खोज्दा बिरानी जस्ती लाग्थ्यौ । म तिमीलाई पुलुक्क हेर्थेँ ,तिमी लजाउँदै ओझेल हुन्थ्यौ । तिमीसँग नजिक भइनसक्तै पनि तिमीले हरिदाइको होटलमा खुवाएको जेरी म अहिले पनि सम्झँदै छु ।
अँ, जेरी प्रसङ्गले एउटा घटनाको सम्झना भयो मलाई । त्यतिखेर म फापरबारीमा पढाउँथेँ । दशैँको बिदाताक होला, म आफ्नो विद्यालयको प्रअ मभधुसूदन शर्मा साहित्याचार्य, सहप्रकोष्ठी श्यामकृष्ण ढकाल र अन्य मित्रहरूसँग घर आउनका लागि हेटौँडा आउँदै थिएँ । आमाले जानकारी दिनुभएअनुसार त्यो दिन एकछाकी थियो । त्यही हुनाले म फापरबारीबाट केही नखाई हिँडेको थिएँ । फापरबारीबाट तिमीसम्म आइपुग्दाको चार कोसको छिटो हिँडाइले मलाई ज्यादै भोक लागिसकेको थियो । एकातिर मेरा स्वर्गीय पिताप्रतिको श्रद्धा र भक्तिले एकछाकीप्रति सतर्क थिएँ भने अर्कातिर पेट र खुट्टाले ज्यादै दु;ख दिन थालिसकेका थिए, वस्तुगत परिवेशसँग सम्झौता गर्नुपर्ने अवस्था आइसकेको थियो । भोको पेटमा यात्रामा ज्यादा थकाइ लाग्छ भन्ने कुरा यसपालि पनि मैले राम्ररी अनुभूति गर्न पाएको थिएँ । हो, त्यही अवसरमा मैले खाजाको भोक मारेको थिएँ । त्यतिखेर नै तिम्रो र मेरो सम्बन्ध प्रगाढ हुने छनक मैले पाइसकेको थिएँ । आखिर तिमीसँगको सान्निध्यले मलाई तिमीनेर तानेरै छाड्यो ।
तिमीसँगको बसाइ, उठाइ र हिँडाइका दस वर्षका एक-एक क्षणहरू मेरा लागि अति प्रिय छन्। तिनै क्षणहरू सम्झेर म तीता र पीडाजनक क्षणहरू बिर्सन खोज्छु ।
जीवनका पीडाका क्षणहरू बिर्सन कोही सुरामा भुल्दा हुन् कोही सुन्दरीमा, कोही कौडामा, अनि कोही तासमा । तर मलाई चित्लु र तिम्रा सम्झना पर्याप्त छन् । चित्लु मेरी प्रिया हुन् तर उनीसँगको संसर्ग अवधि कम हुनाले म तिमीसँगै बढी नजिकिएको छु; सायद तिमीसँग नै बढी रत्तिएको छु, रित्तिएको छु ।
हाम्रो भेट नभएको लामो समयका कारणले पनि मैले अलि लामो गनगन लेखेँ कि जस्तो लागिरहेको छ । अहिले मेरो स्मृतिमा तिमीसँगका एक-एक क्षणहरू तँछाड-मछाड गर्दै आइरहेका छन् ।तिनलाई संयोजन गर्न मलाई अप्ठ्यारो-अप्ठ्यारो भइरहेको छ । सायद भावनात्मक क्षणहरू यस्तै हुँदा हुन् ।
तिमीसँगै बस्न आइपुग्दा त मैले तिमीलाई थोरै र निकै थोरै मात्र चिनेको थिएँ ।कसैले भन्थे त्यो राम्री छे, कोही भन्थे देख्नमा मात्र राम्री छे । यस्तै यस्तै प्रतिक्रियाहरूबिच तिम्रो र मेरो सामीप्य बढेपछि म आफैँले चिन्न थालेँ र साँच्चै चिनेँ । साँच्चिकै भन्नुपर्दा तिमी सुन्दरी हौ भनेर त म पनि भन्दिनँ । तिम्रो बाह्यपन एकथरी छ र आन्तरिकपन अर्को थरी । तिम्रो सङ्गतै नगरी चिन्न खोज्नेहरूले तिमीलाई आफ्नै ढंगले चिन्दा हुन् र तिमीमै समाहित हुनेहरूले भिन्दै ढङ्गले चिन्दा हुन् । म चाहिँ तिमीमै समाहित हुनाले थोरै भए पनि राम्ररी चिन्न पाएको छु ।
अँ, म तिमीसँग लामो सहवासका लागि आउन खोज्दा तिमीसँग मलाई भेट्न दिने-नदिने विषयमा लामो बहस भएको थियो रे । म तिम्रा लागि योग्य छैन भनेर कतिपयले भने भनेर केदार दाइले मलाई सुनाउनुभएको थियो । पछि तिम्रो र मेरो भेट भइसकेपछि कसले छेक्न सक्नु मेरो र तिम्रो सम्बन्धलाई, कसले थुनेर सक्नु तिम्रो र मेरो पिरतीलाई । पिरती आफैँ हुँदोरहेछ, हैन त छतु !
तिम्रो र मेरो सान्निध्यमा रिस गर्नेहरू मात्र थिएनन्, रमाउनेहरू पनि थिए र त म र तिमी त्यसरी एकाकार भएका थियौँ ।तिमीसँगको भेटपछि उद्धव सर, जनार्दन सर, परशुराम सर अनि बेलप्रसाद दाइहरूले हाम्रो मिलनलाई कत्ति सघाउनु भएको हगि !
तिम्रो उर्वरता पो प्रशंसनीय लाग्यो । तिमीलाई सिँचन गर्ने झरना ! तिमीलाई उर्वरशील बनाउने झरना ! तिम्रो उर्वरताको पारख गर्ने झरना ! हो, त्यही झरनामा नुहाउँदा कत्ति आनन्द लाग्थ्यो हामीलाई । चैत-बैशाखको खडेरीमा झरना पातलिँदा कति साथी अधीर भएर हिँडे । कति साथी झरनामै नुहाएर पनि नित्य नित्य नुहाइरहन सकेनन् । हामीले त नुहाइरह्यौं नुहाइरह्यौं हैन त !
आहा ! झरनाको पानी कति कति पोसिलो ! झरनामा नुहाएर, नुहाएको निहुँमा कतिपय अनमोलहरू मणि बने, कतिपय चिरञ्जीवीहरू चकोर बने, कतिपय लीलाहरू शिरीष बने अनि जनक, मीन, अमृत, सुवास, दीपक, राजन, कुमार, देवकी, मुना, वासुदेव, नारायणहरू तृप्त भए । हो, यही तृप्ति आनन्द हो र जीवन पनि ।
हाम्रो निकटता पाएर पनि जसले झरनाको पानी पिएनन्, पिउँदै पिएनन्, तिनलाई के थाहा ! आनन्दको क्षण कस्तो हुन्छ, पीडा व्यक्तिन पाउँदा पीडाको खिल कसरी उक्किएर जाँदोरहेछ ! हो, तिनले त जीवनलाई राम्ररी बुझ्न सकेनन् ।
प्रिय, मैले यहाँ आएर पनि उद्यानका कोपिलाहरू फस्टाउन खोजेको देखिरहेको छु, लक्ष्मीहरूले विवशताहरूलाई कुल्चेर पनि झरनामा नुहाइरहेको, भावना, सिर्जना, कुन्साङ, सोमनाथ र मसानहरू झरनाबाट तृप्त, परितृप्त भएको देखिरहेको छु ।
छतु ! तिमीसँगका मेरा हर पलहरू मेरो शरीरका, मनका हरेक कणकणमा भिजेका छन् र ती मेरा जीवनका महत्त्वपूर्ण अंशियारसमेत बनेका छन् ।
म यस्तो शुष्क भूमिमा आइपुगेको छु, जहाँ निस्वार्थता भन्दा स्वार्थताको, सेवाभन्दा जागिरे प्रवृत्तिको र संवेदनाभन्दा कठोरताको हैकम छ । जब मलाई यी कुराहरूले चिमोट्न थाल्दछन्, अनि शिवजीको जटाबाट निस्केकी गङ्गाझैं तिमीबाट नि:सृत झरनालाई स्मरण र कल्पनाको संयोजनद्वारा आव्हान गरेर परितृप्त हुन्छु ।
प्रिय ! भावनाको अन्त हुँदैन भन्छन् मान्छेहरू । म पनि भावनामै बगिरहेको रहेछु । अब पत्र बन्द गरूँ है !
छिट्टै भेट्ने वाचाका साथ ।
तिम्रो उही आफ्नो मान्छे
तिमी जन्मँदा सग्लै थियौ
सलक्क परेका हातगोडा
बोलिहाल्लान् जस्ता ओठ
मृगका जस्ता आँखा
अनुहारका प्रत्येक उपाङ्ग
तिम्रो सुन्दरता बढाइरहन उद्यत देखिन्थे
जय चुस्की !
आदरणीय मित्र ! नव वर्ष २०१० तपाईँ, तपाईँको परिवार, हाम्रो राष्ट्र र सिङ्गो विश्वका लागि पूर्व वर्षहरूभन्दा सुखद रहोस् । शुभकामना !
तपाईँलाई मीठो लाग्छ
मलाई मीठो लाग्छ
उहाँलाई पनि मीठो लाग्छ